बैंकिङ रोजगारी Archives ~ Page3of 24 ~ Banking Khabar
राष्ट्रिय स्तरका दुई विकास बैंकमा रोजगारीको अवसर
बैंकिङ खबर । दुई वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा जागीर खुलेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेका हुन् । मुक्तिनाथले आफ्नो काठमाडौँस्थित केन्द्रीय कार्यालयका लागि एक जना चिफ …
बैंकिङ खबर । सिद्धार्थ बैंकले उपत्यकाबाहिरका विभिन्न १५ स्थानीय तहमा विस्तार गर्न लागेका शाखा कार्यालयहरुका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । सबै स्थानीय निकायमा बैंक शाखा पुर्याउने योजनाअनुसार, सिद्धार्थ बैंकले विभिन्न १५ वटा स्थानीय तहमा बैंक शाखा स्थापना गर्ने बताएको …
मेगा बैंकमा रोजगारी खुलेको छ । उत्तः बैंकले १ सय १३ जना कर्मचारी मागेको हो । शाखा प्रबन्धक सहित २९ जना अधिकृत र ६६ जना सहायक अधिकृत माग गरेको छ । शाखा प्रबन्धकका लागि स्नातकोत्तर उत्तिर्ण र १ वर्षको प्रबन्धक …
एनआईसी एशिया बैंकले विभिन्न १५ पदमा कर्मचारी माग्यो
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले विभिन्न १५ पदका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । मेनेजर तथा अफिसर लेभलका कर्मचारी माग गरेको बैंकले सबै पदका लागि अनुभव खोजेको छ । इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई नोभेम्बर …
जनता बैंकमा जागीर खुल्यो
बैंकिङ खबर । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडमा विभिन्न पदका लागि जागीर खुलेको छ । बैंकले, ब्रान्च मेनेजर, रिलेसनसिप मेनेजर, रिलेसनसिप अफिसर, अपेरेसन इन्चार्ज र जुनियर एसिस्टेन्टका पदका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो । आफ्नो योग्यताअनुसारको पद छनौट गरी …
बैंकिङ खबर डट कममा रोजगारीको अवसर
नेपालको एक मात्र बैंकिङ अनलाइन न्युज पोर्टल 'बैंकिङ खबर डट कम'मा जागीर खुलेको छ । बैंकिङ खबरले बैंकिङ रिपोर्टिङ गर्न सक्ने, म्यानेजमेन्ट, विजनेस वा मार्केटिङ सम्बन्धी अध्ययन गरेको, मिहिनेत गर्न सक्ने र अर्थतन्त्र सम्बन्धी ज्ञान राख्न सक्ने १० जना कर्मचारी …
सरकारी जागीर खाने अवसर : बीमा संस्थान र कर्मचारी सञ्चय कोषमा कर्मचारीको माग
बैंकिङ खबर । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र कर्मचारी संचय कोषमा प्रशासक पदका लागि जागीर खुलेको छ । सरकारले कर्मचारी संचय कोषका प्रमुखको पदका लागि करारमा ५ वर्ष र बीमा संस्थानको लागि चार बर्षको नियुक्त गर्ने प्रावधानअनुसार आवेदन माग …
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जब एप्लाई गर्नुभयो ? दोब्बर दस्तुरमा एप्लाई गर्ने म्याद अझै बाँकी छ
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जब एप्लाई गर्न छुटाउनुभयो ? धन्दा नमान्नुहोस्, दोब्बर दस्तुर तिरेर एप्लाई गर्ने म्याद कात्तिक १३ गतेसम्म रहेको छ । बैंकले ५७१ जना कर्मचारी माग गरेको छ । गत असोज ६ गते विज्ञापन जारी गरि दर्खास्त आह्वान गरेको बैंकले …
सिटिजन्स बैंकमा रोजगारी खुल्यो, अनुभव नभएकालाई पनि अवसर
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडमा रोजगारी खुलेको छ । बैंकले विभिन्न पाँच पदका लागि कर्मचारी मागेको छ । बैंकले आवश्यक कर्मचारीको संख्या भने तोकेको छैन । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, शाखा प्रबन्धक, डाटावेश एडमिनिस्ट्रेटर, मेनेजमेन्ट ट्रेनी र ट्रेनी एसिस्टेन्ट पदका लागि कर्मचारी माग …
देवः विकास बैंकमा जागीर खुल्यो
देवः विकास बैंकमा जागीर खुलेको छ । बैंकले कैलाली, कञ्चनपूर र डोटी जिल्लाका आठ वटा शाखाका लागि शाखा प्रबन्धक माग गरेको हो । यसका लागि बैंकले कम्तीमा स्नातक उतीर्ण गरेको र बैंकमा ४ वर्ष (दुई वर्ष सुपरभाइजरी भूमिका)मा काम गरेको …